ဆုံဆည်းရာ: သူရဲကောင်းတွေဟာ တော်လှန်ရေးကပဲ ပေါက်ဖွားတယ်
သူရဲကောင်းတွေဟာ တော်လှန်ရေးကပဲ ပေါက်ဖွားတယ်
လယ်သမားတွေမှာလည်း ကျည်ဆံတွေ ပါမလာဘူး
ကျည်ဆံမပါတဲ့ လယ်သမားတွေရဲ့ စိတ်ဓါတ်ဟာ
ဒီမြေဟာ ငါဒို့မြေ ဆိုတဲ့ သီချင်းကို
“မတရားတဲ့ အမိန့်အာဏာ ဟူသမျှ ဖီဆန်ကြ”
လူတွေဟာ သူရဲကောင်းကို ပညာတတ်တွေထဲက ရှာနေကြပေမယ့်
တကယ့် သူရဲကောင်းတွေဟာ တော်လှန်ရေးကပဲ ပေါက်ဖွားတယ်။
တော်လှန်ရေးကို သွေဖယ်သူသည် သူရဲကောင်း မမည်
ရဲဘော်တို့ .. ငါတို့ရဲ့
မိမိ ဆန္ဒကို လွတ်လပ်စွာ ဖေါ်ထုတ်ခြင်းကို
အဲ့ ကြိုးကို ဘယ် ပညာတတ် မှ မဖြည်ကြ
ဘယ် ခေါင်းဆောင်မှ မဖြည်ကြ
ဒီ လယ်သမားတွေကသာ ဖြည်ရဲခဲ့တာ။
ဒီမိုကရေစီ ဆိုတာ မတရားလက်ဝါးကြီးအုပ် ကုမ္မဏီတွေအတွက်ပဲလား?
ဒီမိုကရေစီ ဆိုတာ မြို့ပေါ်က ပညာတတ် လူနည်းစုတွေ အတွက်ပဲလား ?
ဒီမိုကရေစီ ဆိုတာ လက်နက်ကိုင် လူစုအတွက်ပဲလား ဆိုတာ
တောင်တွေကို ဖြိုပစ်တာကို သည်းခံနိုင်မှုမျိုး
ဘယ်သူမှ ထားတတ်ကြမှာ မဟုတ်။
ဧရာဝတီနဲ့ ကြေးစင်တောင်ကို နှိုင်းတာဟာ
အရာတိုင်းဟာ သူ့တန်ဖိုးနဲ့ ကြီးကျယ်တယ်၊ခမ်းနားတယ်။
နွားခြေရာကို မြတ်နိုးတတ်ကြတာ သတိမူကြ
ဒီမိုကရေစီ ရေးကို သွေဖယ်သူပဲ။
အခု မီးသင့်နေတဲ့ ဒေသတွေဟာ
ဟောဒီ ဖိနှိပ်တတ်တဲ့ လူတန်းစားကို
ငါတို့ မျိုးဆက်ရဲ့ ဂုဏ်ကို
ကျောမွဲတွေနဲ့ ခရိုနီတို့ရဲ့ တိုက်ပွဲပဲ ဖြစ်တယ်
အနိုင်ကျင့်ခံရသူ နဲ့ အနိုင်ကျင့်သူတွေကြား တိုက်ပွဲပဲဖြစ်တယ်။
ငါတို့ မျိုးဆက်ဟာ အနိုင်ကျင့်သူတွေ ဘက်မှာ ရပ်သင့်လား
အသာနေရင် အသေနာတတ်ကြတာကို မမေ့လျော့ကြနဲ့။
ဗာလနံ လက်နက်အားကိုးတွေရဲ့ ခေတ်ဟာ ကုန်ဆုံးသင့်ပြီ
တော်လှန်ရေးမှာ ငါတို့ဟာ ရိုးသားစွာ ပါဝင်ရမယ်
ဖေါက်ပြန်တဲ့လူတန်းစား တစ်ရပ်ရဲ့ မဏ္ဍိုင်ကို လူတိုင်းဖြိုကြတော့
တိုက်ပွဲမှာ သွေးကြောင်ခြင်းတွေကို ရပ်တန့်တော့
ဟောဒီ နိုင်ငံမှာ ဖိနှိပ်ခြင်းဟာ ကာလရှည်ကြာအသားကျခဲ့တယ်။
ငါတို့ မျိုးဆက်ဟာ ဖိနှိပ်ခြင်းကို တွန်းလှန်ပြီး
ငါတို့ ဂုဏ်သိက္ခာကို မြှင့်တင်သင့်တယ်။
တရားမျှတရေးအတွက် တိုက်ပွဲတွေ ရှိသင့်ရဲ့
လွတ်လပ်ခွင့်အတွက် တိုက်ပွဲတွေ ရှိသင့်ရဲ့
ညီမျှရေးအတွက်တိုက်ပွဲတွေ ရှိသင့်ရဲ့
သင့်ရဲ့ သိက္ခာကို သင်ကိုယ်တိုင် မြှင့်တင်လော့။